ကိုတရုတ်တို့ ရက်စက်ပုံများတော့…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » ကိုတရုတ်တို့ ရက်စက်ပုံများတော့….
Posted by yuki on Aug 3, 2011 in Opinions & Discussion, World News | 31 comments
ပြီးခဲ့တဲ့လ၂၃ရက်နေ့က တရုတ်နိုင်ငံဝမ်ကျိုးမြို ့ပြင်မှာ မြန်နှုန်းမြင့်ကျည်ဆန်ရထားတိုက်တဲ့သတင်းတော့ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။မိုးကြိုးပြစ်ခံရလို့ေ့ရှကသွားတဲ့ရထားက ရပ်နေတဲ့အချိန် နောက်ကရထားကဝင်တိုက်မိတဲ့အတွက် ရထားတွဲ ၂တွဲ တံတားပေါ်က ပြုတ်ကျခဲ့တယ်။ပထမပိုင်းတော့ မိုးကြိုးပြစ်တာကိုပဲ တရားခံလုပ်နေတဲ့ တရုတ်အစိုးရ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ေ့ရှရထားရပ်နေတာတောင် မီးအနီမပြပဲ အစိမ်းသာပြနေတဲ့ system ချို့ယွင်းနေတာကို သိခဲ့တယ်။ပြီးတော့ ရထားတတွဲမှာတောင် လူပေါင်း၃၅ယောက်မကတာကို သေဆုံးသူကို ၃၅ယောက်ပဲရှိတယ်လို့ကြေငြာခဲ့တယ်။အဲဒီ၃၅ယောက်ဆိုတဲ့အရေအတွက်ကို တရုတ်အစိုးရက ၁၉၉၃ကနေ အခုထိဖြစ်ခဲ့တဲ့ မတော်မဆမှုတွေမှာသုံးခဲ့တဲ့ လူအရေအတွက်ပါ။ 死者３５人ဆိုပြီးရှာရင် အထောက်အထားတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဆိုးရွားဆုံးလုပ်ရပ်ကတော့ တံတားပေါ်က အောက်ပြုတ်ကျတဲ့အတွဲကို အထဲကလူတွေကို ရှာဖွေကယ်ဆယ်တာမလုပ်ဘဲနဲ့ မြေကြီးထဲမြုပ်ပစ်လိုက်တာပါ။တန်းလန်းဖြစ်နေတဲ့အတွဲကိုတော့ ကရိန်းနဲ့ မပြီး ကားပေါ်တင်တာတွေ့လိုက်ရတယ်။တကယ်ဆို မသေဘဲဒဏ်ရာရနေတဲ့လူတွေလဲ ရှိနိုင်တာပဲလေ။တော်တော်လဲ ရက်စက်နိုင်တယ်။သေတဲ့လူတွေလဲ အလောင်းတောင်ပြန်မရဘူး။ဒါပေမယ့် သူတို့ အစိုးရကလဲ ပြည်သူတွေကို ထိန်းတတ်ပါတယ်။ပထမတော့ တရုတ်တွေလဲ ဆန္ဒပြကြတာပေါ့.။အဲဒါတရုတ်ငွေသောင်း၅ဝကို လျော်ကြေးပေးမယ်ကြေငြာတယ်။နောက်ပိုင်းတော့ ၉၆သောင်းပေးမယ်လို့ ပြင်လိုက်တယ်။ပထမပိုင်း တက်တက်ကြွကြွ ဆန္ဒပြနေတဲ့လူတွေလဲ နောက်ပိုင်းမှာ မပါလာတော့ဘူး။နိုင်ငံတကာကတော့ ကယ်ဆယ်မှုဘာမှမလုပ်ဘဲ ရထားတွဲ မြေကြီးထဲမြုပ်တဲ့ လုပ်ရပ်ကို အပြစ်တင်နေကြလေရဲ ့။ဒါပေမယ့် ကိုတရုတ်တို့ကတော့ ……
မှတ်ချက် ၊၊ သတင်းအချက်အလက်ကို ဂျပန်တီဗီသတင်းများမှ ကောက်နုတ်ပါတယ်။
ဟုတ် TV သတင်း မှာ တွေ့ တယ်၊ ဒီလောက် ကြီးကြီးမားမား ဖြစ် တာ ကို လူသေ နုံး နည်း လို့ တော် သေးတယ် လို့ ထင်နေ တာ ၊ မြန်မာ နဲ့ တရုတ် ကတော့ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် အိမ်နီးချင်း ပီသတယ် နော်။
Obama insists US does not fear China – Yahoo! News
(Japan fears China and for 35 million good reasons)
ဒါမှ ငါတို.နိုင်ငံ အစိုးရနဲ့ မဟာမိတ်ကွ စိတ်ဓာတ်လည်း တူတယ်
တရုတ်လည်း နောက်ဆို ဘုန်းဘုန်းတွေပါ သတ်မယ်ထင်တယ်
တိဗက်က ဘုန်းတော်ကြီးတပါးကိုသတ်ဖူးတယ်လေ။အဲဒီတုန်းက လူတွေပြောကြတာ။ မြန်မာပြည်မှာ ရွှေဝါရောင်ဖြစ်ပြီး နာဂစ်ဖြစ်တယ်။တရုတ်တို့လဲ တိဗက်ဘုန်းကြီးသတ်ပြီး ငလျင်ကြီးလှုပ်တာပဲလေ။
အဲဒီရထားတွေက.. ဂျပန်နည်းပညာရယ်..၊ဂျာမန်နည်းပညာရယ်နဲ့ လုပ်တဲ့ရထားတွေဖြစ်ပြီး.. ရထားလမ်းထိန်းကျောင်းစံနစ်ကတော့.. ဥရောပစံနစ်တခုကို.. တရုတ်မူနဲ့ပြင်ထားတာတဲ့..။
ဇွန်လက ပေကင်းနဲ့ ရှန်ဟိုင်းကို ၄နာရီကျော်ပဲကြာတဲ့ ရထားလိုင်းစဖွင့်တယ်။ဂျပန်နဲ့ ဂျာမနီက နည်းပညာအကူအညီယူထားတယ်ဆိုပေမယ့်..(သူတို့ဆီက ရထားပုံနဲ့ ဂျပန်က ရထားပုံ တပုံစံတည်းလေ) သူတို့ကတော့ ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာနဲ့ပဲ တီထွင်သတဲ့လေ။ အဲဒီလိုင်းလဲ ဖွင့်ပြီးမကြာဘုူး…ဘူတာရုံတွေမှာ ရေတွေယိုတာနဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ရော။စီမံကိန်းကို တနှစ်စောပြီး
(1) Government compensation = 915,000 Yuan = 1100, 00000 Kyats
( 1100 lakh kyats ) per each person.
(2) They moved the damaged trains only after the searching for survivors & the rescue works had been announced finished.
It seems normal procedure.
( But, I agree, it might be too early to declare “no more person left alive in train” only after 24 hours)
(3) So far ( at least, until Monday ),
they just moved/positioned the trains &
no train (car) was covered by soil/ground ( not buried yet )
အဲလိုရှာပြီးမှဆိုရင်တော်သေးတာပေါ့ ။သတင်းတွေကတော့ ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေပြောတဲ့အချက်တွေကိုအခြေခံပြီးပြောတာဆိုတော့…။အခုလိုပြောပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆရာ တစ်ပည့် ချင်းဆိုတော့
အဲဒါတွေကို ဒီကအဖေခေါ်နေတော့ .. ဒီကပြည်သူတွေလည်း ဟိုကပြည်သူတွေထက်ပိုဆိုးပြီး သူတို့ကသမျှဇာတ်လိုက်ကနေရတာပါပဲဗျာ
“အဆိုးရွားဆုံးလုပ်ရပ်ကတော့ တံတားပေါ်က အောက်ပြုတ်ကျတဲ့အတွဲကို အထဲကလူတွေကို ရှာဖွေကယ်ဆယ်တာမလုပ်ဘဲနဲ့ မြေကြီးထဲမြုပ်ပစ်လိုက်တာပါ – – – – တကယ်ဆို မသေဘဲဒဏ်ရာရနေတဲ့လူတွေလဲ ရှိနိုင်တာပဲလေ။တော်တော်လဲ ရက်စက်နိုင်တယ်”
I don’t believe it, It is very cruel.
May I haveadetail link ???
No surprise here! The Japs hate China and foragood reason.
“The Rape of Naking” and 35 million Chinese killed by Japanese troops when Imperial Japan tried to swallow China in the 1930’s. Now, the Japs are scared stiff ofarising China so they demonize China at every turn.
မြန်မာကဆရာပါ ၈၈ အရေးခင်းကိုစစ်အစိုးရကကိုင်တွယ်ပုံနမူနာယူပြီး ၈၉တယင်မင်ရင်ပြင်အရေးအခင်းမှာကိုင်တွယ်ခဲ့ပါတယ် ရွှေဝါရောင်အရေးအခင်းကိုကြည့်ပြီးတိဘက်အရေးပုံစံတူနှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်….
မြန်မာပြည် အစိုးရနဲ့က အတွေးအခေါ်ချင်းရော
ကိုယ့် နိုင်ငံသား တွေ ကို တောင်
ကိုယ် မညှာမတာ လုပ်နေမှတော့
ကျုပ် တို ့လို စီးပွားကိုလိုနီ နိုင်ငံမျိုး ဆို
ဘယ်လို စီစဉ် မလဲ မသိဘူး
ဒါနဲ ့ကပ်ပတိန် အမေရိကား ပြန်ပေါ ်လာပြီ
ဘယ်ပျောက်နေတာတုန်း ကပ်ပတိန် ရေ
ရက်စက်မှုအပေါင်း သရဖူ ဆောင်း ကြတဲ့သူတွေပဲ
ဟုတ်ပနော်။ဘာကယ်ဆယ်မှု၊ရှာဖွေမှုမှ မလုပ်ဘဲမြေကြီးထဲမြှုပ်ဖြစ်ရအောင် လူသားတွေဟာ ဖွဲစကွဲလောက်မတန်တော့ဘူးလား။ရက်စက်ပါပေ့နော်. အော်ဒါကြောင့်လဲ ကွန်မြ ူနစ်နဲ ့စစ်အာဏာရှင် သန်းရွှေပေါင်းလို ့ရနေတာပေါ့. အဲလို ဘဲမှတ်ရတော့မှာ
တကယ်သာဆိုရင်တော့ ကယ်ဆယ်မှုဘာမှမလုပ်ဘဲ ရထားတွဲ မြေကြီးထဲမြုပ်တဲ့ လုပ်ရပ်ကို လူသားမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်မို့ ကန့်ကွက်သင့်ပါတယ်။ အကယ်၍များ ကိုယ်သာ အဲဒီရထားတွဲထဲရောက်နေရင်လို့ စဉ်းစားတောင် မစဉ်းစားရဲစရာ အဖြစ်မို့ပါ။ ချီလီ သတ္တုတွင်းထဲက ပြန်ထွက်လာတဲ့ မိုင်းလုပ်သားတွေပြောတာ နားထောင်ကြည့်ရင် တော်တော် ထိတ်လန့်သွားရတာပဲဆိုတာ သိမြင်နိုင်မှာပဲ။
သတင်း စာပေါင်းစုံက လင့်ခတွေ တင် ပေးထားပါ တယ် ။ ရေးထားတာ အများစုက အပျက်အစီး ပုံကို ၇၂ နာရီ ထားပြီးမှ ဖယ်ရှားတာ မဟုတ်ပဲ ၁၂နာရီ အတွင်းဖယ်ရှား လို့ မြန်အားကြီး လို့ ဝေဖန်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ လူရှင်နေရဲ့သားနဲ့ မြေ မြှုပ် ပြစ်တယ်လို့မရေးထား ပါ ။ အစိုးရ ကို ဝေဖန်နေတဲ့ Sina Weibo blog ကရေးထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ ဂျပန်လင့်ခ ကို ဒီက ဂျပန်ကျွမ်းတဲ့ လူနဲ့ဘာသာ ပြန်ခိုင်း ကြည့်အုန်း မယ် ။
comment ကို moderate လုပ်ခိုင်းနေပြန်ပြီ ။
Chinese did not make wrong.
May be they did it hastily / hurriedly.
But, they did not make it cruelly nor mercilessly.
Their Chinese Premier ( Prime Minister ) Wen Jiabao said,
” The country’s development is for the people,
so the most important thing is people’s lives ”
The Prime Minister apologized for not coming to the crash site sooner. He said he had been ill in hospital. He was coming directly from the hospital.
Please allow me to post my comment again
as I think, some villagers did not realize / read it.
(2) They moved the damaged trains only after the searching for survivors & the rescue works had been announced finished ( ရှာပြီးမှ ).
Compensation = 1100, 00000 Kyats ( 1100 lakh kyats ) per each person.
I am definitely sure, they really have good leader.
Don’t easily underestimate one of the world super power countries.
To becomeagreat nation, there are great leaders & great people behind it.
To becomeafailed nation, there are bad leaders & bad people behind it.
By the way, Don’t you think “Myanmar is the failed state” ???
Thanks, ‘Foreign Resident’. Some folks are naive and are quick to believe anything bad about China. They make ‘demonizing’ China as part of their normal life style. Just like Imperial Japan before they tried to conquer China in the 1930’s and 1940’s. First, demonize them as ‘sick men of East Asia’, etc. As ‘subhumans’, then massacre them like dogs thanks in part to British Imperialists for humiliating China with their Opium Wars.
တရုတ် ငလျင် လှုပ်တော့ ဝမ်ကျားပေါင် ချက်ချင်းသွားပြီး ဒုက္ခသည်တွေကို ငိုယိုပြီး ဖက်နေတာ မြင်တော့ လူကြီး ဆိုပေမဲ့ မာန်မာန မရှိဘူး သာမာန် လူတွေ နဲ့ အရော တဝင် အဆင်ပြေပြေ နေတယ်လို့ တွေးမိတယ်။
ကွန်မြူနစ် နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ကြားဖူးတာတွေ ရက်စက်တာတွေ သိတော့ သိပ်မယုံဘူး ဘာကို ပြောမှန်း မသိဘူး။ အခုမှပဲ သိတော့တယ်။ ဆန္ဒတော့ ပြလို့ လျှော်ကြေး ရတယ် ဆိုရင်တော့ သိပ်မဆိုးသေးဘူး ပြောရမလားပဲနော်။
ငါတို့စစ်အစိုးရ ရဲ ့ဆရာတပည့်တွေ